Biden oo Xayiraadda ka qaadaya Dalal uu Trump ka joogay u safarka Mareykanka! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Biden oo Xayiraadda ka qaadaya Dalal uu Trump ka joogay u safarka...
Biden oo Xayiraadda ka qaadaya Dalal uu Trump ka joogay u safarka Mareykanka!
Madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka Joe Biden oo Arbacada xilka la wareegaya ayaa la ogaaday in uu ka shaqeynayo sidii uu xayiraadda Safar uga qaadi lahaa Dalalka uu Trump ka joojiyay in ay u safraan Muwaadiniintooda Dalkaas.
Joe oo ah wakiilka Siyaasadeed ee Xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka ayaa damacsan in uu furfuro dhammaan xargaha siyaasadeed uu dhuujiyay Madaxweynihii ka horreeyay ee Jamhuuriga oo dalalka qaar xannibaad saaray.
Ilo ku dhaw Madaxweynaha 3-da cishe kadib xilka la wareegaya ayaa Warbaahinta u sheegay in Biden uu damacsan tahay ku dhaqaaqista tallaabadaas, inkasta oo aysan kala sheegin haddii uu guud ahaan ka qaadayo iyo in uu kala xulasho ku sameynayo.
Liiska Waddamada uu Donald Trump ka joojiyay u safridda Mareykanka ayaa kala ah: IIraan, Ciraaq, Soomaaliya, Suuriya, Suudaan, Liibiya & Yemen, waxaana markale uu cusbooneysiiyay xayiraadda dalalkaan kor ku xusan.
Madaxweynaha todobaadkaan talada Mareykanka qabanaya 4-ta sano soo socota ee Joe Biden ayaa daneynaya in uu waji cusub u sameeyo siyaasadda dalkiisa, isla markaana uu badalo go’aamo uu qaatay Madaxweynihii xilka uga horeeyay.
Previous articleSaciid Deni oo amar ku bixiyay in la dhaqan geliyo go’aamadii la soo saray
Next articleAl-Shabaab oo weeraray saldhig ciidamada AMISOM ee Jubadda Hoose